Lamaanaha isku dhaarsaday Jacaylka indhaha la’ | Berberanews.com
Home Qubanaha Lamaanaha isku dhaarsaday Jacaylka indhaha la’
Horay ayaa loo yiri, “Jacaylka waa indhoole”. Laakiin maxaa dhacaya markii labo qof oo indhaha naafo ka ah ay is jeclaadaan?
“Waa jacayl gabi ahaanba ka duwan midka caadiga ah; waa jacayl aan ku dhisneyn muuqaal wanaag iyo qurux,” ayuu yiri Niraj Gera, oo ah sawir qaade u dhashay Hindiya oo abaalmarinno badan ku guuleystay.
Musalsal sawirro ah oo uu dhawaan soo bandhigay ayuu Mr Gera uga sheekeeyay qisada nin iyo haweeney aragga la’ oo is jeclaaday, wuxuuna sheekadooda ku cabiray ilaa 13 sawir.
“Maalin ka mid ah bishii July ee sanadkii hore, waxaan ka dukaameysanayay dhismaha Connaught [oo ku yaalla magaalada Delhi], kaddib waxaan arkay lamaane qurux badan. Way socdeen gacmaha ayeyna is heysteen, iyagoo dhoollacaddeynaya, oo sheekeysanaya,” ayuu yiri Mr Gera oo la hadlayay BBC-da.
Lamaanahan waxaa caawinayay nin kale oo ku hoggaaminayay qeybaha kala duwan ee dhismaha Connaught.
Mr Gera wuxuu sheegay in xaaladda lamaanahan ay aad usoo jiidatay: “Waxay ahayd markii ugu horreysay ee aan arko lamaane aragga la,” ayuu yiri.
Sidaas awgeed wuu u tagay, wuxuuna ugu yaboohay inuu geeyo ilaa boosteejada.
“Intii aan sii soconnay waddada, waan sheekeysaneynay, waxaana weydiiday inay nin iyo xaaskiis yihiin, wayna ii xaqiijiyeen. Marka waxaan weydiiyay haddii ay raalli ka yihiin in sheekadooda la faafiyo. taasna way iga oggolaadeen,” ayuu yiri.
Musalsalka uu sameeyay sawir qaadaha wuxuu si buuxda ugu sharraxay qisada jacaylka dhabta ah ee Deepak Yadav iyo Arti Chaurasia, oo labadooduba ay da’dooda tahay 21 sano.
Deepak wuxuu sheegay in isaga iyo gabadhaba ay isticmaali jireen telefoonno casri ah laga heli karo adeegyada loogu talagalay dadka aragga naafada ka ah.
“Markii aad taabato batoonka hadalka ee telefoonka, waxaa dib kuugu soo laabanaya jawaab hadal ah,” ayuu yiri.
Maalin ka mid ah bishii June ee sanadkii 2018-kii, Deepak wuxuu sheegay in magaca Arti uu uga soo booday qeybta magacyada dadka isu bandhigta ee Facebook-ga, sidaasna ay dadka qaar ku codsadaan saaxiibtinimada.
“Waxay ila ahayd inaan waxyaabo badan isku mid ka ahayn, sidaas awgeed waxaan u dirsaday codsi saaxiibtinnimo,” ayuu yiri isagoo la hadlayay BBC-da.
Arti inay aqbasho waxay ku qaadatay muddo labo isbuuc ah. “Ma aanan garaneynin, marka waxaan la yaabanaa qofka uu yahay?” ayey tiri.
Laakiin ugu dambeyn way ku darsatay liiska saaxiibbada.
Waxay sheekeystaanba ugu dambeyn waxay kala qaateen lambarrada telefoonnadooda.
“Markii ugu horreysay waxaan telefoonka iskula hadalnay 31-kii bishii July,” ayuu yiri Deepak.
“Wicitaankaas ugu horreeyay wuxuu socday 90 daqiiqo”, ayey tiri Arti.
Si joogto ah ayey u wada hadli jireen, maalin maalmaha ka mid ahna, Arti waxay weydiisay inuu gabar saaxiibad ah leeyahay.
“Wuxuu yiri, maya, xerada wey bannaantahay”, ayey tiri iyadoo qosleysa.
“Telefoonka ayaan iskula hadleynay. Saaxiibkey ayaan la fadhiyay, iyaduna waxay ku dhiirratay inay i dhahdo ‘Waan ku Jeclahay’. Anigana waan ugu jawaabay,” ayuu yiri Deepak.
Laakiin Deepak wuxuu sheegay inuu hal daqiiqo hadalka ku dhagay marka ay Arti jacaylka u qiratay.
“Waxaan is dhahay hadalkaas aniga la iiga baahnaa marka hore, sidey iyada ku dhahday? Xoogaa ayaan aamusnaa, kaddibna waan ku dhahay anigoo ugu jawaabaya”, ayuu yiri.
Labo bilood kaddib, Deepak ayaa ugu tagay meesha ay dagganeyd, markii ugu horreysay ayeyna si toos ah u kulmeen.
Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay, Deepak iyo Arti si joogto ah ayey u kulmaan, waxayna sheegeen in jacaylkooda uu xoogeystay.
Deepak wuxuu sheegay in hadda wixii ka horreeyay uu qoyskiisa ka qarin jiray jacaylkooda”.
“Aabahay wuxuu i dhahaa hadda ka fogow jacayl iyo wax la mid ah, dib ayaad ka heli doontaa waqti badan oo aad waxyaabahaas ku maareysid. Ku dadaal waxbarashadaada, xirfadna yeelo,” ayuu yiri.
Hase yeeshee Arti waxay sheegtay in qoyskeeda intooda badan ay ka war qabaan xiriirka ay la leedahay Deepak, inkastoo aabaheed uusan waxba ka ogeyn.
Waxaan weydiinay waxa dhici kara haddii ay waalidiintooda BBC-da ka arkaan sheekadooda, ayna ka war helaan xiriirkooda.
“Waxaan rajeyneynaa inay arki doonaan,” ayuu yiri Deepak.
“Haddii ay arkaan in warbaahinta ay amaanayaan xiriirkeenna, iyaguna dhanka fiican ayey ka eegi doonaan”, ayey tiri Arti.
Lamaanahan waxay hadda raadsanayaan shaqooyin, si ay u xaqiijiyaan wadajirka mustaqbalkooda.
“Waan is mehersan doonnaa isla marka uu mid naga mid ah helo shaqo,” ayey tiri Arti. “Laakiin waxaan mararka qaar ka walwalaa inaan duqoobi doonno annagoo wali shaqo helin oo aan is guursanin.”
Previous articleWaa maxay Caronavirus?
Next articleMaamulka iyo dadweynaha Degmada Saylac oo iska kaashanaya sidii biyaha badda looga xidhi lahaa magalada